Top News: Kulan ka dhacay Villa Soomaaliya oo dhexmaray Axmed Madoobe Iyo Siyaasiyiintii Mucaaradsanaa Maamulkiisa “faafaahin” – Kismaayo24 News Agency
Top News: Kulan ka dhacay Villa Soomaaliya oo dhexmaray Axmed Madoobe Iyo Siyaasiyiintii Mucaaradsanaa Maamulkiisa “faafaahin”
by admin 9th December 2015 9th December 2015 054
Kulan albaabada u xirnaa oo ay Saxafadda Dibad joog ka aheyd ayaa xalay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya waxa uu ku dhexmaray Madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe iyo Siyaasiyiinta ka soo jeeda Gobolka gedo ee ka hor imaadsanaa Jiritaanka Maamulkiisa.
Hogaamiye madoobe oo kulanka Codsaday ayaa waxaa la kulmay Gudi ay soo xuleen Hogaamiyayaasha Mucaaradka kuwaas oo ay kamid ahaayeen Xildhibaan Magan, Siyaasiga Cabdishire,Maxamuud Sayid aadan iyo Sheekh Awlibaax, iyadoo kulankaasine uu ahaa mid la isku dibooday.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh maxamuud ayaa kulankan dabada ka riixayay wuxuu horudhac u ahaa shir 12-ka bishaan oo ku beegan Maalinimada Sabtida ah la filaayo inuu ka furmo Magaalada Kismaayo, kaasi oo lagu wado in lagu soo afjaro Ismarinwaagii siyaasadeed ee kajiray Jubaland.
Axmed Madoobe ayaa garowsaday in hadii sidaan lagu sii jiro ineysan muuqaneyn xal in lagaarayo taasi badalkeedane waxa uu tilmaamay inuu hadda diyaar u yahay wada hadal dhexmara isaga iyo siyaasiyiinta diidan Jiritaanka Maamulkiisa.
Dhinacooda SIyaasiyiinta Ree Gedo ayaa ku adkeystay in lafuliyo dhamaan qodobada ay doonayaan in looga wadahadlo shirka nabadeynta ree Jubaland, iyadoo halkaasine uu Axmed Madoobe ka balanqaaday Fulinta Qodobada ay cuskadeen Hogaamiyayaashani.
Sikastaba waxaa muuqaneysa ifafaalo isu soo dhawaansho oo ka dhexdhacda ree Jubaland waase hadii dhinacyadu ay daacad ka noqdaan fulinta ajandayaasha miiska saaran.
Kismaayo24 kala soco wararka xaqiiqada ah ee ku saabsan Arimaha Jubooyinka.
Degdeg: Shil gaari oo ka dhacay Duleedka Degmada Baardheere oo sababay khasaaro aad u badan.
Daawo Muuqaal: Maamulka Mandheera oo sheegay iney Dowladda ka sugayaan iney jawaab ka bixiso Xasuuqii halkaasi ka dhacay.
Xaalada Guud ee Magaladda Marka waa sidee ,kadib dilalkii ay AMISOM ka geysatey xalay ilaa saakey (Magacyadda dadka la diley).
admin 1st August 2015 27th August 2015
Daawo: Madaxweyne farmaajo oo dalka galiyay marxalad dagaal isagoona shabaab u qabtay mudo 60 cisho ah in ay……
Tifaftiraha K24 6th April 2017 6th April 2017
Daawo: Soomalia oo mudo 27 sano kadib soo nooleyneysa Dalxiiskii iyo dhaqanka
admin 13th December 2017